OKCash စျေး - အွန်လိုင်း OK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OKCash (OK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OKCash (OK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OKCash ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 134 793.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OKCash တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OKCash များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OKCashOK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0364OKCashOK သို့ ယူရိုEUR€0.0307OKCashOK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0278OKCashOK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0331OKCashOK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.323OKCashOK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.229OKCashOK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.801OKCashOK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.135OKCashOK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0483OKCashOK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0507OKCashOK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.8OKCashOK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.282OKCashOK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.197OKCashOK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.72OKCashOK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.14OKCashOK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0499OKCashOK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0556OKCashOK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.13OKCashOK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.253OKCashOK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.88OKCashOK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩43.18OKCashOK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦14.05OKCashOK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.65OKCashOK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.994
OKCashOK သို့ BitcoinBTC0.000003 OKCashOK သို့ EthereumETH0.00009 OKCashOK သို့ LitecoinLTC0.000669 OKCashOK သို့ DigitalCashDASH0.000401 OKCashOK သို့ MoneroXMR0.000409 OKCashOK သို့ NxtNXT2.84 OKCashOK သို့ Ethereum ClassicETC0.00536 OKCashOK သို့ DogecoinDOGE10.5 OKCashOK သို့ ZCashZEC0.000442 OKCashOK သို့ BitsharesBTS1.12 OKCashOK သို့ DigiByteDGB1.16 OKCashOK သို့ RippleXRP0.129 OKCashOK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00125 OKCashOK သို့ PeerCoinPPC0.121 OKCashOK သို့ CraigsCoinCRAIG16.58 OKCashOK သို့ BitstakeXBS1.55 OKCashOK သို့ PayCoinXPY0.635 OKCashOK သို့ ProsperCoinPRC4.56 OKCashOK သို့ YbCoinYBC0.00002 OKCashOK သို့ DarkKushDANK11.68 OKCashOK သို့ GiveCoinGIVE78.8 OKCashOK သို့ KoboCoinKOBO8.29 OKCashOK သို့ DarkTokenDT0.0335 OKCashOK သို့ CETUS CoinCETI105.08